🥇 ▷ Xiriirinta soodejinta iyo rakibida macruufka 8 Beta 2 ee iPhone iyo iPad ✅
Xiriirinta soodejinta iyo rakibida macruufka 8 Beta 2 ee iPhone iyo iPad
Nooca cusub ee ‘Beta 2’ ee macruufka 8 ayaa imanaya, soo dejinaya xiriidhada aaladaha Apple oo dhan
Shalay Apple waxaan daabacaa nooca cusub ee beta ee ‘iOS’, kani waa kan cusub ee iOS 8 Beta 2, kaas oo ay ka buuxaan warar. Haddii aad xiiseyneyso kala soo bax beta nooca 2 ee macruufka 8 adoo aan noqon horumariyaha, si aad ugu tijaabiso iPhone-kaaga, iPod taabashada, iPad ama iPad mini, hoos waxaad kahelaysaa xiriirada tooska ah ee soo dejinta.
Dhamaan xiriiriyeyaasha aad ka heli doonto hoosta waxay ansax u yihiin dhammaan moodooyinka qalabka iOS (iPhone, iPod taabashada, iPad iyo iPad mini) oo la jaan qaada nooca cusub ee nidaamka hawlgalka mobilada ee Apple, macruufka 8, beta 2. Xiriirrada soo socda ee aad awoodid kala soo bax xitaa haddii aadan ahayn horumariyaha, goor dambe waad arki kartaa sida loogu rakibo qalab kasta.
Soo dejiso xiriidhada loogu talagalay macruufka 8 Beta 2 ee iPhone (5s, 5c, 5 iyo 4s)
iPhone 5S (Moodel A1453, A1533) Download
iPhone 5S (Moodel A1457, A1518, A1528, A1530) Download
iPhone 5C (Moodel A1456, A1532) Download
iPhone 5C (Moodel A1507, A1516, A1526, A1529) Soo dejiso
iPhone 5 GSM (Moodel A1428) Soo dejiso
iPhone 5 GSM iyo CDMA (Moodel A1429) Soo dejiso
U soo dejiso macruufka 8 Beta 2 ee iPod Touch
Soo dejiso xiriidhada loogu talagalay macruufka 8 Beta 2 oo loogu talagalay iPad iyo iPad mini
Sida loo rakibo macruufka 8 8 Beta 2 on iPhone iyo iPad adigoon noqon horumarin
Hadaad rabto inaad tijaabiso cusboonaysiintaan, inaad awoodid ku rakib beta beta 2 ee macruufka 8 qalabka aaladda (iPhone, iPad) oo beta 1 horey loogu rakibay waxay si fudud ugu cusbooneysiin doonaan isla aaladda, tan darteed waa inay aadaan:
Dejinta> Guud> Cusboonaysiinta Software
Oo halkan guji Soo degso oo rakib, ka dibna geli lambarka amniga aaladda, aqbal shuruudaha iyo shuruudaha, ka dibna u oggolow aaladda lafteeda.
Haddii aadan wali isku deyin, waxaan kugula talineynaa inaad raacdo tillaabooyinka lagu muujiyey casharka si aad ugu rakibto noocyada beta ee iOS 8 ee iPhone iyo iPad, adoo adeegsanaya xiriiriyeyaasha soo dejinta ee lagu soo bandhigay qodobka kore.
Ogeysiis: Beta 2 ee iOS 8 wuxuu la jaan qaadayaa iPhone iyo iPad (oo leh 3G ama 4G isku xira) laga soo bilaabo Orange, Vodafone, Movistar iyo howl wadeenada taleefanada kale, ilaa iyo inta aan soo dejineyno nooca u dhigma aaladda aan heysano. Dabcan, haddii ay dhacdo aaladda uu xiro xiriiriyaha, waxay kaliya la shaqeyn doontaa SIM lambarada u dhigma.